Umxokelelwano wakho wamajoni omzimba ukukhusela kwizifo. Isitofu sifundisa umxokelelwano wamajoni omzimba ukuthintela ulosuleleko oluthile okanye ukulwa isifo esithile. Ukuphuhlisa isitofu, abaphandi kufuneka basivavanye ebantwini. Uphononongo lwesitofu luvavanya ukuba ingaba izitofu zikhuselekile na (azibangeli iingxaki zezempilo) nokuba ingaba imixokelelwano yamajoni omzimba yabantu iyasabela na kwizitofu zophononongo. Uphononongo lwesitofu lunakho nokusetyenziselwa ukufumanisa ukuba ingaba izitofu ziyaluthintela na okanye ziyalulwa na ulosuleleko okanye isifo esithile. Kuthatha iqela lophononongo lwezitofu ukuvelisa isitofu esikhuselekileyo nesisebenza kakuhle.
Iza Kukhuselwa Njani Impilo Namalungelo Abathathi-Nxaxheba?
Ukukhusela impilo nokuhlonipha amalungelo abathathi-nxaxheba zizinto eziphambili ukubaluleka kumntu wonke kwiHIV Vaccine Trials Network (HVTN) nakuJanssen Vaccines & Prevention B.V., inxalenye yeJanssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Abasebenzi basekliniki baza kunika abo bathembisa ukuba ngabathathi-nxaxheba ulwazi olupheleleyo malunga nezitofu zophononongo kunye neenkqubo zophononongo, neenzuzo nemingcipheko enokubakho ngokuthatha inxaxheba, namalungelo abanokubanawo njengabathathi-nxaxheba. Ngokuqhelekileyo, umntu ukhululekile ukuba angathi ewe okanye hayi ekujoyineni uphononongo – esi sigqibo sesakhe ngokupheleleyo.
Ngexesha lophononongo, abasebenzi basekliniki baza kuthi gqolo ukubeka esweni abathathi-nxaxheba ukuqinisekisa ukuba izitofu zophononongo azibangeli naziphi na iingxaki zempilo. Kananjalo abasebenzi basekliniki baza kubuza abathathi-nxaxheba malunga nayo nayiphi na imiba yasekuhlaleni abasenokuhlangabezana nayo ngokuba kuphononongo, kwaye baza kubancedisa ekuyisombululeni.
Kukho amanye amaqela azimeleyo abandakanyekayo ekukhuseleni amalungelo nempilo-ntle yabathathi-nxaxheba. Iikliniki zophando ezikufutshane nawe zingakwazi ukukunika iinkcukacha ezinatyiswe nangakumbi ngala maqela ukuba unomdla.